खेलकुद परिषदका पदाधिकारी मानवतस्करीमा । ईन्स्योरेन्स कम्पनि भन्छ, खुट्टा काटे मात्र पैसा दिन्छौ – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 147 | DON Nepal खेलकुद परिषदका पदाधिकारी मानवतस्करीमा । ईन्स्योरेन्स कम्पनि भन्छ, खुट्टा काटे मात्र पैसा दिन्छौ – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 147 – DON Nepal
Home डन समाचार खेलकुद परिषदका पदाधिकारी मानवतस्करीमा । ईन्स्योरेन्स कम्पनि भन्छ, खुट्टा काटे मात्र पैसा दिन्छौ – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 147
खेलकुद परिषदका पदाधिकारी मानवतस्करीमा । ईन्स्योरेन्स कम्पनि भन्छ, खुट्टा काटे मात्र पैसा दिन्छौ – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 147
By Don NepalNov 18, 2017, 17:35 pm0
न्याय र जन आस्थाको एउटा धरोहरको रुपमा अघि बढ्दै गएको नेपाली टेलिभिजन इतिहास कै सर्वाधिक सफल कार्यक्रमले आज सम्म कति स्टिंग अप्रेसन गरेर सरकार र भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनको फन्दामा पुराएको छ । नेपाली सेना भित्र हुने भ्रष्टाचार प्रकरण , नेपाल प्रहरी भित्र हुने भ्रष्टाचार प्रकरण , सशस्त्र प्रहरी भित्रको भ्रष्टाचार प्रकरण लगायत ठुल ठुला राष्ट्रिय मुद्धाहरु पनि रविले उठाएका छन् ।
सिधाकुरा जनतासंग शुरु भए देखि रविको टिमले आफ्नु बशमा भएको र सकेको सहयोग जो कोहीलाई पनि गर्दै आएको बिदिदै छ । भ्रष्टाचार ,घुसखोरी ,तस्कर ,राजनैतिक माफियाले आक्रान्त बनाएको नेपालमा ‘सिधाकुरा जनतासंग’ले आशाको एउटा दियो बाल्न सफल भएको छ कि गर्न चाहने हो भन्ने यो देशमा धेरै कुरा सम्भव छ तर त्यसको लागि जरुरि छ त देशको माया र देश बनाउने दृढता । कुनै समय न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति अब बदलिएको छ र पिडितहरु भन्न थालेका छन् न्याय नपाए रविको सिधाकुरा जनतासंग जानु ।
राष्ट्रको धमिराहरुलाई नाङ्गो बनाउन सिधाकुरा जनतासंगको प्रमुख उद्देश्य हो जसको लागि रविको टिमलाई जस्तो सुकै दवाब आए पनि देश र जनताको खातिर त्यसलाई सामना गर्ने गरेका छन् ।
आजको भागको बिशेषता
खेलकुद परिषदका पदाधिकारी मानवतस्करीमा । ईन्स्योरेन्स कम्पनि भन्छ खुट्टा काटे मात्र पैसा दिन्छौ !
काठमाडौं । निर्वाचनको मुखमा देशभरी उमेदवारलाई लक्षीत गरी बम बिस्फोट गराइएको छ । जताततै भयको वातावरण श्रृजना गर्न खोजीएको छ। तर दुखको कुरा यो मुलुकमा हुन गइएरहेको ऐतिहासीक चुनावको बेला देशमा गृहमन्त्री नै छैनन् । तपाई भन्न्ु होला प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नै गृह मन्त्री पनि हुन ।
खल्तीमा भएको कागज भाषणको हो कि ज्ञापन पत्र हो थाहा नहुने,अझ भएको मााइकमा भाषण कस्ले लेखेको भनेर सोध्ने प्रधानमन्त्री ज्युबाट गृहमन्त्रालयको थप भार कसरी सम्हालीएला? सुन्दा चित्त दुखेको हो भने त्यस्तो सानो चित्तलाई फराकिलो पार्नुहोस । एक त मतदाताहरु शिक्षीत छैनन् र भोटहरु अत्याधिक वदर हुने प्रवल सम्भावना छ । त्यसमाथि दैनिक बम पड्काएर मतदातालाई तर्साउन खोज्नेहरुलाई यसरी नै छाडा छोडी दिने ?भोट हाल्न जानेले पुर्णरुपमा सुरक्षीत महशुस गर्नु परेन ? यो इराक हो ?अफगानस्तान हो,सिरीया हो ?क्रान्तीका नाउमा बम पड्काउने कामलाई आतंकवाद भनिन्छ । यस्ता कृयाकलाप गर्नेलाई आतंकवादी भन्न नसकिने ? क्या गज्जब र क्या डर छेरुवाहरुको झुण्ड छ राजनितिमा ।
भारतले नाकाबन्दी गरेर जनजिवन कष्टप्रद बनाइ दिदा त्यसलाई भारतले गरेको नाकाबन्दी भन्नन सक्ने । देश भर उमेदवारलाई लक्षित गरी व्वाङ व्वाङती बम पड्काउने र मान्छे मार्न खोज्ने मानिस र समुहलाई आतंकवादी भन्न नसक्ने ?जनता निर्धक्क भएर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न चाहान्छन् तर सरकार यो के तमासाहो ?चुनाव विथोल्न चाहने शतिmहरुको बारेमा सरकारलाई थाहा छैन ? छैन भने गृहमन्त्रालयले यत्तिका धेरै इन्टेलीजीन्स किन पालेको ? सुनिन्छ केही दुष्ट छिमेकीहरु र रुष्ट मित्र राष्ट्रहरुलाई यो देशमा चुनाव भएको मन परेको छैन रे कतै बम पड्काउनेहरु यिनै दुष्ट र रुष्टहरुको पैसामा त चलिरहेको छैनन?
यो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था त्यत्ती कमजोर पनि छैन कि २ /४ जना गुच्चा खेल्ने उमेरका फुच्चाहरुले प्रेसर कुकर बोकेर पड्काउँदै हिड्दा पनि मुलुकको प्रहरी र सेना बुट बजारेर मात्र बसोस । मुलुकको शान्ती,स्थाइत्व विकास र परीवर्तन चाहने हर कोहीको मनको आवाज हो यो । शायद तपाईको क्रान्तीको अन्तिम लक्ष पनि यहि होला त्यसैले महानक्रान्तीकारी ज्युहरु ,प्रेसर कुकरहरु दालभात तरकारी पकाउन मात्रप्रयोग गरौँ,जनताथाके हजुर । जनता बुलेट होइन व्यालेट चाहन्छन् ।
पुरा विवरण भिडियोमा हेर्नुहोला:
TAGरबि लामिछाने सिधा कुरा जनतासंग
Previous Postकतै बम पड्काउनेहरु दुष्ट र रुष्ट छिमेकी राष्ट्रहरुको पैसामा त चलिरहेको छैनन? (सिधा कुरा जनतासंग भिडियोसहित) Next Postआखिर यो बाख्रो मर्दा किन रोए दुनियाभरका मान्छे ?
इराकको बग्दादबाट नेपाली चेलीको चिच्चाहट आवाज सहित अन्तिम अबस्थामा सहयोगको अपेक्षा (सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो ठाउ बाट सकेको सहयोग गरौँ))
फटाह लुटेराहरुको प्रदाफास, अब बन्छ नेपाल – माता सबिता ! सक्दो शेयर गरौ ! भिडियोसहित
कतै बम पड्काउनेहरु दुष्ट र रुष्ट छिमेकी राष्ट्रहरुको पैसामा त चलिरहेको छैनन? (सिधा कुरा जनतासंग भिडियोसहित)